လင်္ကာ: မနောမြေမှ ကျောင်းသားတပ်မတော် အပိုင်း ( ၁ )
မနောမြေမှ ကျောင်းသားတပ်မတော် အပိုင်း ( ၁ )
by Nang Aung Htwe Kyi on Sunday, 11 March 2012 at 03:03 ·
မငယ်ရေ စာရေးပါဦးတဲ့ ။ ABSDF - NB မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် မှ ဘယ်လို လွတ်မြောက်လာလဲ ဆိုတာတဲ့ ။မှတ်တမ်း အနေနဲ့ သိခြင်ပါတယ်တဲ့... ဆိုတော့ ကြိုးစားပြီးရေးလိုက်ပါတယ် ။ စာရေးဆရာ မဟုတ်တော့အရှေ့အနောက် ဟိုရောက်ဒီရောက် ဆိုရင်လဲ သီးခံပြီးသာ ဖတ်ကြပါတော့ ။
အီးတီ ကပြောလာပြန်ရော .. လွမ်းစရာလေးတွေရေးဦးလေတဲ့ ... လွမ်းစရာဆိုတာ မငယ်တို့ ကျောင်းသားရဲမေဘဝမှာ ကြုံဆုံခဲ့တာ တွေ ၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာလေးတွေ .. ဆိုးခဲ့ ဂျီကျခဲ့ကြတာတွေ .. ဒါတွေဟာ ခုချိန်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ လွမ်းစရာတွေပေါ့ ၊ ဆိုတော့ အီးတီ က အေဘီ မြောက်ပိုင်းကကျေင်းသားရဲမေ ဘဝက ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရပ် တချို့ ကိုဝေငှခံစားစေခြင်တယ် ထင်လို့လွမ်းစရာအ ဖြစ်လေး တွေ ရေးလိုက်ပါတယ် ။
...... အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေပြန်ရယူကြည့်ခြင်ပါတယ်။ တောထဲမှာ အနေဆင်းရဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာ ငွေပေး ဝယ်လို့ မရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလေ။တယောက်နဲ့တယောက် အနစ် နာခံတယ်။ကူညီတယ်။နောက်ကြ ပြောင်ကြနဲ့ ဘာနဲ့မှမတူဘူး ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဆိုတာလေ။ဖြတ် သန်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေမှာ လွမ်းစရာတွေ ပြောလို့မှ ကုန်မှာမဟုတ်တော့ ............
အီးတီဆိုတာ ပဒူ ၅ ကောင်ထဲကတကောင်ပေါ့ ။ ရှင်းပြမယ်နော် ။ မငယ် တို့ ABSDF - NB မှာရဲမေတွေထဲမှာ ကလေး၅ယောက် အုပ်စုလေးတစုရှိတယ် ။ ၁၆ နှစ်အရွယ်တွေပေါ့ ။ သူတို့ကို မငယ် နဲ့ အသေးလေး ( စိုးစိုးလွင် - အငယ်ကလေးတွေအခေါ် မမလေး ) က ပဒူ ၅ ကောင် လို့ခေါ်တယ် ။ သူတို့က နန်းစော ၊ သင်းသင်းညီ ၊ ထက်ထက် ၊ အေးအေးမြင့် ( အီးတီ )၊ အေးအေးသန်း ( အမ်း ) တို့ပေါ့ ။ သူတို့ ပဒူ ၅ ကောင်နဲ့ အမြဲ တတွဲတွဲ နေတာ မငယ်နဲ့ အသေးလေးပေါ့ ။ ဆိုတော့ မငယ်၊အသေးလေးနဲ့ ပဒူ ၅ ကောင် တို့ရဲ့ သံ ယောဇဉ်ကြီးတာဟာ ရှင်းပြလို့တောင်မရနိုင်ဘူးလေ ။ ရဲဘော်ရဲဘက်သံယောဇဉ် နဲ့ မောင်နှမသံယောဇဉ် ပေါင်းစပ်ထားတော့ စာနဲ့ရေးချ ပြလို့ မရဘူးပေါ့ ။ မငယ် က ကလေးဘိုလုပ်တယ် ။ နောက်တယ် စတယ် ။ သူတို့ဆိုးလို့ စကားနားမထောင်ရင် ကိုယ်ကလည်း စိတ်မ ထင်ရင် ဆော်ထဲ့လိုက်ရော ။ နန်းစော အခံရဆုံးထင်တယ် ။
ပဒူ ၅ ကောင်ကလဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ရန်ဖြစ် ငြင်းခုန်ရောဘဲ ။ ပြီးရင်တိုင်ပြီ ။မမလေး မမငယ် သင်းသင်း ကဒါလုပ်တယ် .. ဟုတ်ဘူးနန်းစောက စတာ .. အီးတီကလဲ သူ့အသံစူးစူးနဲ့ အသံကုန်အော်ဟစ်ငြင်း .. ထက်ထက် ကတော့ ဝင်မပါ ပွဲ ကြည့်ပရိသတ် .. အမ်း က တော့ရီနေတာ များတယ် .. ပြီးရင်လက်ကလေးချိုး က ပြီးရန်ပွဲထဲ ကထွက်လာ တခွိခွိနဲ့ရီ ။ အဲ့ဒါနေ့စဉ်ပုံ မှန်ဖြစ်နေတာ ။ ပြီးရင်အမြဲ တတွဲတွဲ ၊ ခွဲပြီးတော့လဲ မနေနိုင်ကြဘူး ။ ၇န်ဖြစ်ပြီး အဆောင်ထဲဝင်လာကြ ။ ရန်ဖြစ်ပြီးအဆောင် ထဲကပြန် ထွက်သွားကြ ။ သူတို့အချင်းချင်းသာ ရန်ဖြစ်မယ် ။ ကြားလူအဝင်မခံ အပြောမခံ ။ တယောက်ကိုတယောက် ကူညီတယ် ။ တယောက်ကိုတွေ့ရင် တပြုံကြီးတွေ့ပြီဘဲ ။ ညအိပ်တော့လဲ တခန်းထဲမှာ စုအိပ်တယ် ။ ညတိုင်း အိပ်ယာထဲအထိ ငြင်းခုန်နေတတ်လို့ အသေးလေးက အိပ်ကြဖို့အော်ရတယ် ။
မငယ်နဲ့အသေးလေးနဲ့ အတူအိပ်တယ် ။ နောက် ခင်ရွှေလိူင် ( ယခု ABSDF ဥက္ကဌ သံခဲ ရဲ့အမျိုးသမီး ) ၊ ဂျုဂျူး ( မာမာ ထွန်း - ဂျိုးလင်းပြာစာစောင် နဲ့ သံချောင်း အမျိုးသမီး )၊ လုမိုင်၊ ခါးတောင်၊ စန်းစန်း၊ ခင်ချိုဦး ၊ဒေါ်သောင်းလှ။ ဘောက်မိုင် (ဆေးဆရာမ)၊ အားယမ်တီး(ဆေးဆရာမ)၊ နောက် ကေအိုင်အေ ကနေရဲမေအင်အားဖြည့်ဖို့လွှဲယူခဲ့တဲ့ မအေး ။မနွယ် ၊ မသွယ် ၊ မငွေ ၊ မမူ ၊အေးမိစံ စ သဖြင့်ပေါ့လေ ။
ကျောင်းသားရဲဘော်ထဲမှာဆို နောက်တန်းမှာရော ရှေ့တန်း မှာပါ အမြဲ အတူတူက ဘိုဘို( မိဘို- မိုးကျော်သူ )၊ ကျော်ခိုင်ဝင်း၊ စောမြအောင် ၊ ကိုစိန်သန်း ၊ ကိုလှထွန်း ၊ စသဖြင့်ပေါ့လေ ။စကြနောက်ကြနဲ့ ပျော်စရာတွေပေါ့ ။
မှတ်မိသေးတယ်ကွာ.. လိုင်စင်မြေရဲ့ အေးမြတဲ့မနက်ခင်းတရက်ပေါ့ .. မင်းတို့ ပဒူ ၅ ကောင်ထဲကတကောင် မမငယ်နဲ့မင်း တို့မမလေး ကုတင်အောက်မှာ ထားထားတဲ့ ရေပုလင်းလာယူပြီး အိမ်သာသွားတာ .. မကြာပါဘူး အိမ်သာထဲကနေ အားဆိုတဲ့ အသံပြဲ ကြီးနဲ့အတူ မမလေး .. မမငယ် ဆိုပြီး အော်ဟစ် သံကြားတော့ ကိုယ်တို့တွေလဲ ထိတ်လန့်တကြားနဲ့ အိမ်သာထဲ ပြေးဝင်ကြည့် တော့ ငိုအားထက် ရီအားသန်တဲ့အဖြစ် .. အိမ်သာထဲမှာ ပဒူတကောင် အိပ်ယာထကာစ ဆံပင်စုတ်ဖွားဖွားနဲ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပြီး ရေ ပုလင်းနဲ့ ရေနံဆီပုလင်း မှားဆွဲသွားပြီး ရေနံဆီကို ရေအထင်နဲ့ အသုံးပြုလိုက်လေသတည်း ။ ရေးနေရင်းနဲ့တောင် ရီမိပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အဖြစ်က .. ရေချိုးပျင်းတဲ့ ပဒူတကောင် မနက်စောစော ရေနံဆီတန်ခိုး နဲ့ ရေချိုးလိုက်ရလေခြင်း ။ အိမ်သာထဲကနေ ရေချိုးတဲ့နေရာဆီ သွားတဲ့ ပဒူတကောင်ပုံစံ .. လမ်းလျှောက်တာ ကားယားကားယားနဲ့ .. ဟားတိုက်ပြီးရီမိတယ် ။ သူကပြောတယ် မမငယ် ကအူပုတ် တယ် တဲ့ ။ ဘာလို့ဆိုတော့ အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်က ကေအိုင်အေ အထိပြန့်တာလေ ၊ ခု ဒီမှာရေးပြီဆိုတော့ ဘယ်အထိပြန့်မယ် မပြောတတ် ။ ခွင့်လွတ်ပါ ပဒူလေးရေ .. လွမ်းစရာလေးမို့ပါ ။ ရေနံဆီနဲ့ရေနဲ့ ကွာခြားချက် ခံစားမူ့လေး သိခြင်လို့ရှင်းပြပါဦး ပဒူလေးရေ ။
မငယ် ရဲမေဖြစ်ကာစက တချို့ရဲမေတွေက ရှေ့တန်းမှာလေ ။ နောက်တန်းဗဟိုမှာ အသေးလေး ၊ နန်းစော ၊ဒေါ်သောင်းလှ၊ အီးတီ ၊ ခင်ချိုဦး ၊ လုမိုင် ၊ ဘောက်မိုင် နဲ့ အားယမ်တီး ကကေအိုင်အေ မှာ ဆေးသင်တန်းတက်နေတော့ တခါတလေ ဗဟိုပြန်လာတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်က မငယ်တို့ ရဲမေဆောင်မှာ နေဝင်းစိုး ဆိုတဲ့ ခွေးလေးတကောင်ရှိတယ်လေ ။ ခွေးကလေးကိုတော့ ရဲမေတွေသိပ်ချစ်ကြတယ် ။ ခွေး နာမည်ကိုတော့ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး ။ ခွေးနာမည် နေဝင်းစိုး ပေးခဲ့တာ အမှတ်စဉ် ၁ ကရဲမေတွေလေ ။ နေ ဆိုတာ နေဒွန်း (ယခု USA) ဝင်း ဆိုတာ မျိုးဝင်း ၊ စိုး ဆိုတာ မြင့်စိုး ခေါ် သံချောင်း(ပြည်တွင်း ထောင်ဒဏ် ခံနေရစဲ) ပေါ့ ။ ခွေး ကလေးကတော့တအားချစ်ဖို့ကောင်းပါ တယ် ။
မငယ်တို့ ABSDF-NB ဟာ စတင်ဖွဲ့စည်းကာစအချိန်ဆိုတော့ စစ်စည်းကမ်းတအားတင်းကြပ်တယ် ။ ရဲမေဆောင် ကိုခွင့်မပါ ဘဲဘယ်သူမှ မသွားမလာရဘူး ။ အထူးသဖြင့် ညနေ ၆ နာရီ နောက်ပိုင်း ပေါ့ ။ ရီးစား ထားရင် အလုပ်ကြမ်း ၊ ထောင်ဒဏ် ၊ ထိတ်တုန်းပေါ့ ။ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားရဲဘော် တွေလဲ ကေအိုင်အေ ကသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ စစ်ရေးသင်တန်းတွေကို တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး တကဲ့ စစ်တပ်အသွင် စနစ်တကျ ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ် ။ အဆင့်ဆင့် အမိန့်နာခံမူ့ရှိတယ် ။
ဆိုတော့ တရက်မနက်စောစောပိုင်းမှာ ခွေးကလေး နေဝင်းစိုး ကို ရှာမတွေ့ဘူး ။ မငယ်တို့ ဝါးခုတ်၊တိုင်ထမ်း အာသံကုန်း (လူသတ်ကုန်း) ဘက်သွားတိုင်း နေဝင်းစိုး အမြဲလိုက်နေကြလေ ။ ခွေးပျောက်ရှာတာ နောက်မှသိရတာက ကျောင်းသားသင်တန်းဆရာ ကိုခိုင် တို့ ညကြီးလာပြီး ခွေးလေး နေဝင်းစိုး ကိုသတ်စားလိုက်ကြတယ်လေ ။ မငယ် တို့နောက်တန်းမှာရှိနေတဲ့ ရဲမေတွေအားလုံး စိတ်မ ကောင်းတွေဖြစ် ၊ မျက်ရည်ကျ ၊ ဒေါသတွေထွက်ပေါ့ ။ သံချောင်းတို့ မျိုးဝင်းတို့က ဒါကြတော့ အရေးမယူပေးဘူး ။ ဒါပေါ့ ခွေးက သူတို့နာ မည်တွေနဲ့ မှည့်ထားတော့ သဘောပေါက်ပေါ့ ။
ရဲမေတွေနဲ့ သင်တန်းဆရာတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီ ။ ငါတို့ခွေးနင်တို့သတ်စားရင် နင်တို့ဝက် ငါတို့သတ်စားမယ်ပေါ့ ။ စိန်ခေါ်ခြင်း ပေါ့ ။ အဲ့ဒါနဲ့ဘဲ ရဲမေနှစ်ယောက် တပ်ပိုင်ဝက်ကို ရှေ့တယောက်ကကြိုးနဲ့ဆွဲ နောက်ကတယောက်က ဝက်ဖင်တွန်း နဲ့ စစ်ရေးလေ့ ကျင့် ကွင်းကနေ ဖြတ်ကျော်ပြီး အောင်မြင်စွာ ဘဲ ဝက်ကြီးကို ရဲမေဆောင် ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ် ။ တတပ်လုံးက ဝက်နဲ့ ရဲမေ လုံးပန်းနေ တာ ကြည့်ပြီး နင်တို့ရဲမေတွေ ဝက်မသတ်ရဲ ပါဘူးပေါ့ ။ ဒီဘက်က ရဲမေတွေကလဲ အညံ့မခံ အရူံးမပေး စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဝက်သတ်မူ့ကြီးကျုး လွန်မိပါတယ် ။ ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့ အားယမ်တီးက ဒီမှာထိုးရတယ်ဆိုပြီးချက်ကောင်း လုပ်လိုက်မှဘဲ အဆုံးသတ်တော့တယ် ။
ဆိုတော့ နောက်နေ့ လူစစ်တန်းစီမှာ ညအချိန်မတော် ရဲမေဆောင် သွားတဲ့ရဲဘော်နဲ့ ဝက်သတ်တဲ့ရဲမေထွက်ဆိုတော့ အားလုံးဘဲ ဒုတ်နဲ့တင်ပါး နှစ်ပါးသွားကြရပါတယ် ။
အဲဒါနဲ. မရှေးမနှောင်းမှာပဲ မငယ်တို.ရဲ. ရဲမေဆောင်ကို ရဲဘော်အချို. ရှေ.တန်းကပြန်လာတော့ လာလည်ကြတယ်၊ အတွေ.အကြုံတွေ ပြောကြ ဆိုကြနဲ. ကျောင်းသားရဲဘော်တစ်ယေါက်က ပွတ်ချွန်းလိပ်တော့ မငယ်လဲ ယူပြီးလိပ်ကြည့်တယ်၊ ပြီးတော့ တစ်ဖွာ နှစ်ဖွာ လုပ်ပြီး ချာတိတ်ကိုပေးလိုက်တယ်၊ အဲ မကြာပါဘူး နောက်နေ.လူစစ် တန်းစီမှာလေ နာမည်ခေါ်ပြီးအပြစ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ ပြောတာက “ရဲမေထဲက တစ်ယေါက် မနေ.က စည်းကမ်းဖေါက်တယ်ပေါ့ဆိုပြီး ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ရဲမေရှေ.ထွက်” ဆိုတော့ ဟာ သေရော ….. သွားပါပြီ…… လူစစ်တန်းစီနေတဲ့ လိုင်းထဲကနေ ရှေ.ထွက် တစ်နှစ်သုံးတစ် လုပ် ညာလှည့်၊ တစ်နှစ်သုံးတစ် လမ်းလျှောက်… ဟုတ်ကဲ့ စခန်းမှူးရှေ.ရပ်…… အပြစ်ရှိလား …. ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်……. အသံပြတ်ပြတ်နဲ.ပြန်ဖြေ၊ လက်နှစ်ဖက် အရှေ.ဆန်.တန်း၊ သတိအနေအထားဆွဲ၊ အသင့်ပြင်ထား၊ တင်ပါးပေါ်ကျလာမယ့် ၀ါးလုံးစိမ်းကို စောင့်နေလိုက်တယ်။ လာပါပြီ၊ ဂွမ်းကနဲ နာလိုက်တာ (၃) ချက် တစ်နေရာထဲ ထိထိမိမိပဲ၊ သင်တန်းဆင်းပြီးကထဲက အရိုက်မခံရတာ၊ ရဲမေဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံး စားရတဲ့ အီကြာကွေး၊ နင့်နေရော။ မှတ်မှတ်ရရပဲ။ မှတ်မှတ်ရရလို.ပြောတာနော် အမှတ်ရှိသွားတယ်လို. ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
အဲလိုရိုက်လို.နာရင် ရိုက်နေတဲ့အချိန် တင်ပါးကို လက်နဲ.မပွတ်ရဘူး၊ ပွတ်ရင် ပွတ်တဲ့လက်ပါ ခံသွားရမယ်၊ အီကြာကွေး သုံးချောင်းစားပြီး စခန်းမှုးကို သတိဆွဲ၊ အလေးပြု၊ တစ်နှစ်သုံးတစ် ညာလှည့်၊ လမ်းလျှောက် တန်းစီနေတဲ့ လိုင်းထဲပြန်ဝင်၊ အေးဆေး သက်သာ တန်းဖြုတ်၊ အမလေး အခုမှပဲ တင်ပါးပွတ်ခွင့်ရတော့တယ်။ တင်ပါးကို လက်နဲ.ပွတ်တဲ့အထိ မျက်နှာက စပ်ဖြည်းဖြည်း၊ ပြီးတော့ ရဲမေဆောင်ထဲပြေးဝင် အိပ်ယာပေါ်မှောက်အိပ်၊ အရိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ရေနွေးပုလင်းနဲ.ကြိတ်၊ အမှတ်ကတော့ မရှိကြပါဘူး။
ဒီတစ်ခါတော့ နောက်တန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ရဲမေအားလုံးတစ်ယေါက်မကျန် အရိုက်ခံရတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုကို စုစည်းပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျူးလွန်ကြပါတယ်၊ အဖြစ်ကဒီလိုပါ ။
နောက်တန်းမှာရှိနေတဲ့ ရဲမေတွေ မငယ်၊ မလေး၊ နန်းစော၊ ခင်ချိုဦး၊ ဒေါ်သောင်းလှ၊ ET၊ လုမိုင်၊ (သင်းသင်းပါလားမပါလား သတိမရတော့ဘူး)။ တရုတ်ရွာ ရှားဟော့ပါ သွားဖို.စခန်းမှူးဆီခွင့်တောင်းပြီး သွားကြတာ၊ လိုင်စင်ကနေ ရှာဟော့ပါဆိုရင် တောင်အဆင်းကြီးပဲ ပြေးဆင်းသွားကြတာ၊ ရွာရောက်တော့ KIA ဒူးဝါးတစ်ယေါက်အိမ်မှာ ဟိုစားဒီစားနဲ. နောက်တော့ ဆပ်ဖီသောက်ကြရော ။ ဆပ်ဖီဆိုတာ ကောက်ညှင်းနဲ.လုပ်တဲ့ ကဇော်ရည်တစ်မျိုးပါ၊ သောက်လို.အရမ်းကေါင်းတယ်၊ ချိုချဉ်စူးလေး၊ များများသောက်မိရင် မူးတတ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အလကားရတိုင်း နင်းကန်ပိတ်သောက်ပါတယ်၊ သူကလေတိုက်ရင် ပိုမူးလာတယ်လေ၊ သောက်တုန်းတော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မဖြစ်ကြဘူး။ အချိန်တန်လို. စခန်းကို ပြန်ကြတော့ လမ်းမှာ ရီဝေေ၀လေး စဖြစ်လာကြပြီ၊ တောက်လျှောက် လိုင်စင်စခန်းက တောင်တက်လမ်း၊ ဆေးရုံကုန်းကလမ်းက ဖြတ်လမ်းသုံးပြီး တောင်တက်ကြတယ်၊ မူးလာကြပါပြီ၊ ခင်ချိုဦး အန်ပြီ၊ ကျမ မငယ်မူးပြီ၊ အားလုံးလဲ မူးလာကြပြီ၊ ရီတီတီလေး ဖြစ်လာကြပြီ၊ ပျော်လိုက်ကြတာလေ၊ မငယ်က မူးလေ သီချင်းအော်ဆိုလေပေ့ါ၊ အော်ကိုဆိုတာ၊ ကျောင်းသားရဲမေတစ်စု သံပြိုင်သီချင်းဆိုပြီး အချိန်တန်တော့ ကျောင်းသားတပ်ပြန်ရောက်၊ ပျော်ကြတယ်ကွာ၊ ရဲမေဆောင်ရောက်။ နောက်တစ်နေ. မနက်တော့ လူစစ်တန်းစီမှာ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ကျောင်းသားရဲမေများ ကျောင်းသားတပ်မတော်မှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်မှု၊ အပြစ်ရှိသော ရဲမေများထွက်လဲဆိုရော မငယ်တို.ကျောင်းသားရဲမေတွေ တစ်ယေါက်ပြီး တစ်ယေါက်ထွက်ပြီး အီကြာကွေးအစားခံလိုက်ကြရတာ တဆောင်လုံး ရဲမေကုန်ရော။ လူစစ်တန်းစီအပြီး ရဲမေတွေ တစ်ယေါက်မျက်နှာ တစ်ယေါက်ကြည့်ပြီး မျက်နှာပိုး သိပ်မသေဘူး။ တင်ပါးနဲ.လက်နဲ. ပွတ်နေကြတယ် အနာပြေအောင် လုပ်နေကြတာလေ။
ကဲ ဝက်သတ်တဲ့ ရဲမေတွေထွက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ရဲမေ ထွက်၊ ဆပ်ပီသောက်တဲ့ရဲမေတွေထွက်၊ ပြုံးမိတယ် ပြန်စဉ်းစားမိတယ်၊ အရိုက်ခံရလဲ ပျော်နေတာပဲ၊ ကိုယ်လဲလုပ်ချင်တာလုပ် သူတို.လဲ ရိုက်ချင်သလိုရိုက်၊ မငယ်ဆို စစ်သင်တန်းမှာ ဒုတ်ချက်ပေါင်း ၆၀ ကျော်နီးပါး အစားခံခဲ့ရတာ။ လွမ်းစရာပေါ့၊ ကြွားစရာမရှိ ကြံဖန်ပြီး မင်းသင်တန်းမှာ ဘယ်နှစ်ချက် အရိုက်ခံရလဲဆိုတာ ပြိုင်ကြသေးတယ်။ အံ့ပါရဲ. တို.များရဲ. ကျောင်းသားစိတ်ဓါတ်၊ ခပ်ပျော်ပျော်ပဲ၊ ဖြစ်လေရာဘ၀မှာနော်။
အော် ကြုံတုန်း ဂုဏ်ယူစွာ ပြောလိုက်ပါရစေ၊ ABSDF မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ သင်တန်းဆင်း သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရတဲ့ ရဲမေ နှစ်ဦးပဲ ရှိတယ်လေ၊ အဲဒါ နန်းစောနဲ. မငယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲထင်ပါတယ် ဒို.တွေကို ထောက်လှမ်းရေးဆိုပြီး စွပ်စွဲတာ၊ သေနတ်နဲ. ရင်းနှီးမှုရှိတယ် ဆိုပြီးတော့လေ။ ရဲဘော်တွေနဲ. တပြေးထဲ ပစ်မှတ်ချိန်ပစ်ရတာနော်၊ အရည်အချင်းခေသူတွေ မဟုတ်၊
နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာတော့ ရှေ.တန်းထွက်တဲ့ ရဲမေတွေ ပြန်ရောက်လာ၊ နောက်တန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ရဲမေတွေနဲ. ပြောကြ ဆိုကြ ပျော်စရာကြီးပေ့ါ၊ ရဲမေတွေပါတဲ့ စစ်ကြောင်းဗျူဟာ (၂) ဗန်းမော်စစ်ကြောင်းနော်၊ CS စစ်ရေးတာဝန်ခံ သံချောင်း ညာဖက်လက် ဆုံးရှူံးရတဲ့ တိုက်ပွဲ၊ အတွှေ.အကြုံတွေ အများကြီးပဲ။ ပြောနေ ရေးနေရင် ၀တ္ထု အရှည်ကြိး ဖြစ်သွားမှာ သေချာတယ်။
မှတ်မှတ်ရရတွေထဲက မငယ်၊ မလေး၊ ET၊ နန်းစော၊ သင်းသင်းညီ၊ မိဘို (ခ) ဘိုဘို၊ ကျော်ခိုင်ဝင်း၊ စောမြအောင်၊ လှထွန်း၊ စိန်သန်း၊ ရာကွတ် နောင်ပါရာ စခန်းဗျူဟာ ၃ ပေ့ါ။ အဲဒီတုန်းက ET က မငယ်ရဲ. ယူနီဖေါင်းအကျီင်္ အိတ်ကပ်ထဲကို ပင့်ကူတစ်ကေါင်ဖမ်းပြီး ထည့်လိုက်တာ၊ ဘာပြောကေါင်းမလဲ အော်ဟစ်ခုန်ပေါက်ပြီး ထမင်းတောင် မစားနိုင်တော့ဘူး၊ တခြားဘာမှ မကြောက်ဘူး ပင့်ကူနဲ.ပတ်သက်ရင် လုံးဝမရဘူး၊ ကြီးကြီးသေးသေး၊ အဆိပ်ရှိရှိ မရှိရှိ၊ ET ရဲ. ထိထိမိမိ စလိုက်တာ မငယ်ထမင်းငတ်သွားခဲ့တယ်။
ET ရယ်လေ မျက်နှာငယ်လေးနဲ.မမကြီးကို ဒီလိုမစတော့ဘူးနော်လို. တောင်းပန်တယ်၊ မငယ်ကို ET က တစ်ခါတလေ မကြီးလို.ခေါ်တယ်၊ သူများတွေ ခေါ်သလိုမျိုး မခေါ်ချင်လို.တဲ့၊ အားလုံးက မငယ်လို.ခေါ်တော့ နန်းစောက မမငယ်လို.ခေါ်တယ်၊ သူများတွေခေါ်ချင်သလိုမျိုး မခေါ်ချင်လို.တဲ့၊ ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် မငယ်ဟာ မငယ်ပါပဲနော်၊ လူအနည်းစုက ဘယ်လိုပဲ စွပ်စွဲ စွပ်စွဲ မငယ်ဟာ မငယ်ပါပဲနော်။
ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်းက ကချင်နယ်မြေမှာ တည်ထောင်ခဲ့တော့ ကျောင်းသားရဲမေ ရဲဘော်တိုင်း ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေလုပ်တဲ့ ခေါင်ရည်ကို အလကားရရင် သောက်ကြတာပါပဲ။ တစ်ရက်မှာ ET တစ်ယေါက် ဘယ်ကရတဲ့ ခေါင်ရည်သောက်လာလဲမသိဘူး၊ နောင်ရာပါမှာ သောက်ပြီးမူးပြီး ဂျီကျနေတော့ မငယ်က သူ.ကို ရေချောင်းထဲဆွဲနှစ်ထားတာ အမူးပြေအောင်လို.ပေ့ါ၊ ဒီလိုပဲလေ သူတို.မူးတော့ မငယ်ကပြန်ထိမ်းရတယ်၊ အပြန်အလှန်ပေ့ါ။ မငယ်က အကြီးဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာ ဆပ်ဖီသောက်ပြီး မူးတော့ မှတ်မှတ်ရရ ညဖက်နဲနဲ အချိန်ရောက်နေပြီ။ အဲဒီနေ.က ပွဲရှိတယ်၊ အလကားရရင် အကုန်စား၊ အကုန်သောက်လေ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပြီ။
ဆပ်ဖီသောက်ရင် မူးတယ်ဆိုတာသိလဲ သောက်လို. အရမ်းအရသာရှိတော့ သောက်မိကြတာပါပဲ။ ဖျော်ရည်လေးလိုပဲလေ။ အဲဒီညက မငယ်မူးတော့ လုမိုင်ခမျာ သနားပါတယ်၊ မငယ် ယူနီဖေါင်းခါးပါတ်ကို သူ.ခါးပတ်နဲ. ဆွဲချိတ်ထားပြီး မငယ်ရေချောင်းထဲ မကျသွားအောင် သူဆွဲထိမ်းပေးနေရတယ်။
သူ.အပြောအရဆိုရင် မငယ်ကမနေ.ည က အဲဒီရေချောင်းတံတားပေါ်မှာ လမင်းကြိးကိုကြည့်ပြီး စကားတွေစုံနေအောင်ပြောပြီး ငိုသတဲ့။ ပြန်မယ်ဆိုတာလဲ မပြန်ဘူးငြင်းလို. ခါးပတ်အပိုတစ်ချောင်းနဲ. သူ.ခါးပတ်နဲ. ချိတ်ထားပြီး ချောင်းထဲခုန်ချမှာကြောက်လို. တညလုံး မငယ်နားစောင့်နေရတာတဲ့ ကိုယ်ဖါသာတောင် ရှက်သွားမိတယ်။
ငါဘာပြောလဲ လုမိုင်ဆိုတော့ ကျမလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ နာမည်တွေ ပြောပြောပြီး ငိုသတဲ့၊ တော်ပါသေးရဲ.လို. ဆိုရမယ်။ ကေါင်းကေါင်းသတိမရတာကိုပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာတွေများ ပြောမိလို. ဘယ်သူ.နာမည်တွေ ရေရွတ်ပြီး လွမ်းမိသလဲ၊ လမင်းကို ကြည့်ပြီး ဘာတွေစိတ်မကေါင်းဖြစ်လို. ငိုခဲ့သလဲ မသိ၊ မူးနေသကိုး။
ခရီးတွေထွက်ရတော့ ခရီးစဉ်ထဲက တစ်ခုပေါ့လေ၊ ဗျူဟာ ၂ ဗန်းမော်ခရိုင်ဖက်ဆင်းတော့ ဆေးဆရာမ အားယမ်တီးလဲ ပါတယ်လေ၊ စစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် စကားပြောလိုက် နောက်လိုက်ပြောင်လိုက်နဲ. ခရီးဆက်ကြတယ်။ မငယ်က ရေချိုးတာကြိုက်တယ်၊ဘယ်နေရာမှာ စခန်းချချ ရေချိုးဖို. နေရာလိုက်ရှာရတာ အမော၊ အဲဒီတုန်းက ညတော်တော်နက်မှ ရေချိုးဖို. အချိန်ရတော့ အားယမ်တီးနဲ. ရေချောင်းသွားဖို. တိုင်ပင်ပြီး သွားကြတာပေ့ါ။ ရေချောင်းရောက်တော့ တစ်ယေါက်မျက်နှာတစ်ယေါက်ကြည့်ပြီး အရမ်းညနက်နေပြီ ဘယ်သူမှ ရေချောင်းမှာ မရှိဘူး။
ကဲ လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို. လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေချိုးကြရအောင်ပေါ့လေ။ ပြောလို.ဆုံးရော အားယမ်တီးက မြန်တယ် ယူနီဖေါင်းချွတ်ပြီး ရေထဲဆင်းချသွားပြီ။ သိတယ်ဟုတ်၊ သဘောပေါက်၊ မငယ်တောင် ယူနီဖေါင်းအကျီချွတ်မလို. ပြင်နေတုန်း ကံကေါင်းချင်တော့ အချိန်မှီပဲ ရေချောင်းဟိုဖက် တရုတ်ကမ်းဖက်က တရုတ်တွေ ငါးဖမ်းဖို. မီးအိမ်လေးတွေနဲ. ဆင်းလာကြတာတွေ.တော့ မငယ်လဲ ရေချိုးမလို.ပြင်နေတာကို ရပ်ပြီး အားယမ်တီးကို သတိလှမ်းပေးလိုက်တယ် ရေထဲမှာ ငုံ.နေဖို.။
အားယမ်တီးခမျာမှာတော့ တစ်ယေါက်ထဲ ရေချောင်းတ်ိမ်တိမ်လေးထဲမှာ လရောင်ကလဲ လင်းထိန်လို. သူ.မှာလဲ အ၀တ်အစားမရှိ ဗလာ၊ တရုတ်တွေကလဲ ရေချောင်းထဲဆင်းလာ၊ မငယ်က သူ.ကိုပြန်ခေါ် သူကလဲ ရေချောင်းထဲက ထလာလို.မရ၊ လာနိုင်သလောက် ရေနဲ.ဖုံးကွယ်ပြီး လာရှာပါတယ်။ ရေကလဲ ခြေသလုံးတောင်မှ မမြုပ်တော့ အားယမ်တီးခမျာ လုံမလားထင်ပြီး မှောက်လို. . မငယ်ကလဲ သူ.ကိုအော်ပြီး မှောက်လိုက် မှောက်လိုက်လို. ပြောပါတယ်။ မပြောလို.မှ မဖြစ်တော့တာ လရောင်အောက်မှာ အကုန်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်နေတာ၊ အားယမ်တီးလဲ မငယ် ကျမကို အကျီတွေယူပေးအုံးလို. အော်ဟစ်တောင်း၊ မငယ်ကလဲ ရယ်ကေါင်းကေါင်းနဲ. ရယ်နေတော့ မယူပေးနိုင်ဘူး သူ.ကိုပဲကြည့်ပြီး တဟားဟားနဲ. အော်ရယ်၊ အားယမ်တီးက ရေတိမ်တိမ်လေးထဲမှာ အားယားမှောက်ပြီး ပေါ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေနဲ.ပက်ပြီး လုံလေမလားလို. ဖုံးအုပ်၊ မငယ်ကတော့ ဘာမှ မကူညီနိုင်ပဲ ချောင်းစပ်ကနေ ခွက်ထိုးခွက်လန် အော်ရယ်နေတော့တယ်။ အားယမ်တီးရေစိတ်မဆိုးနဲ.နော် မင်းကိုကြည့်ရတာ ချောင်းထဲမှာ ရေဆေးငါးကြီးလိုပဲလေ၊ လရောင်အောက်မှာ ဆင်းဆင်းကြီး လဲနေတာ ရယ်ရတယ်လေ၊ အခုထိပဲ တွေးလိုက်ရင်။ အမှတ်တရလေးတွေပါ၊ လွမ်းပါတယ် အမှတ်တ၇လေးတွေ ရေးဖြစ်တာပါ။
ပဒူတစ်ကေါင်အကြောင်း အမှတ်တရလေး ပြောပါရစေနော်၊ အဲဒီဗျူဟာ ၂ ဗန်းမော်ခရိုင် ခရီးစဉ်ပဲထင်ပါတယ်၊ တရုတ်ရွာဖက်မှာ စခန်းချတယ်လေ၊ ညဖက်ပေ့ါ၊ မငယ်တို. ရဲမေတွေလဲ အားလုံးစုပြီး အပေ့ါအပါးသွားဖို. နေရာရှာကြတာပေ့ါ၊ အဲဒိဒေသက ရွာတွေမှာက အိမ်သာမထားကြဘူးလေ ထားစရာလဲ မလိုလောက်အောင် မြူနီစပယ် ၀က်တွေ ရှိနေတာကိုး။
ဂဃနဏ မရှင်းပြပါရစေနဲ.နော်၊ အဲဒီရွာတစ်ရွာရဲ. ညတစ်ညပေ့ါ၊ မငယ်တို.ကျောင်းသားရဲမေတစ်စု အတူတူ တောထိုင်ဖို.နေရာကေါင်းရှာတော့ ဟုတ်ပြီ တွေ.ပြီ အားလုံးစုထိုင်တော့ မရွှေပဒူတစ်ယေါက် ရှည်လျားပြီး မငယ်တို.နဲ. မလှမ်းမကမ်း သွားထိုင်တယ်။ မသွားနဲ.လို. ပြောလဲမရဘူး၊ အဲဒီ ပဒူ ငါးကေါင်ဟာတစ်ခါတလေ သူတို.လုပ်ချင်တာ လုပ်တယ်၊ ပြောလို. ရချင်မှရတာ၊ အဲဒီတော့ အဲဒီ ဟာသဇတ်လမ်းလေး ပေါ်လာတာပေ့ါ။
အဲဒီ ပဒူလေးဟာ သူ.နေရာသူသွားထိုင်တာ ယူနီဖေါင်းချွတ် သူကိစ္စသူရှင်းပေ့ါ၊ ထိုင်နေရင်း အမှောင်ထဲမှာ မျက်လုံးက ကျင့်သားလဲရရော အဲဒီပဒူလေး မဟာ့ မဟာ အမှားကြီးကို မြင်လိုက်ပါပြီ ။ သူ.ရှေ.မှာ သူမသွားခင်ထဲက ရဲဘော်တစ်ယေါက်က ထိုင်နေတာ။ သူသွားတော့ ဟိုရဲဘော်လေးကရှက်ပြီး ငြိမ်နေတာ။ သဘောပေါက်နော် မရွှေပဒူ ဘယ်လိုထိသွားလဲဆိုတာ။ ဟာသပေါ့ ။ မမေ့ဘူး။
အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေပြန်ရယူကြည့်ခြင်ပါတယ်။ တောထဲမှာ အနေဆင်းရဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာ ငွေပေးဝယ်လို့ မရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလေ။တယောက်နဲ့တယောက် အနစ်နာခံတယ်။ကူညီတယ်။နောက်ကြ ပြောင်ကြနဲ့ ဘာနဲ့မှမတူဘူး ၊ ရဲဘော် ရဲဘက်စိတ်ဆိုတာလေ။ဖြတ် သန်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေမှာ လွမ်းစရာတွေ ပြောလို့မှ ကုန်မှာမဟုတ်တော့ အီးတီ ရေ ဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်ပါကွာ။ နောက်ပိုင်းတော့ ၁၂ရက်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ( ပြည်ထောင်စု နေ့ ) ရဲ့ ခံစားမှု တွေ ရေးသားတင် ပြပါ့မယ် ။
Nang Aung Htwe Kyi facebook